यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी प्रकरण –कसले के भने ? - Ek Jamarko
Home / विचार / यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी प्रकरण –कसले के भने ?
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी प्रकरण –कसले के भने ?
सिन्डिकेट प्रणाली खारेजी संगै पूर्वाधार बिकाश र ब्यबस्थापनमा जोड दिंदै जापान बाट हेमन्त गिरि सामाजिक संजालमा लेख्छन - ख़ासमा भन्ने हो यातायातको सिन्डिकेट ज्यादै सानो विषय हो नेपालमा । कम्तिमा गरीबले सस्तो मूल्यमा यात्रा त गर्न पाएका छन । हो, यातायात व्यवसायीका समितिहरुमा सुधार गरेर जान सकिन्छ, नियमन गर्न सकिन्छ,सरकारको नीति भित्र बाँधेर काम गराउन सकिन्छ । समिति खारेज नै गर्ने कुराले भोली गरीबले गाडी नै चढ्न नसक्ने दिन नआऊलान भन्न सकिन्न ।
यातायातमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी अगाडी पूर्वाधार र ब्यबस्तापन् को स्तर सुधार्ने हेमन्त गिरीको बिचारमा फरक मत राख्दै पत्रकार मदन खनाल लेख्छन - कुरा ठिक हो । लोकतन्त्रमा सिण्डिकेट अस्विकार्य बिषय हो । सबै साना ठुला सिन्डिकेट तोड्नु पर्छ । तर दश खर्बको यातायात व्यवसाय करको दायरा बाहिर छ । कम्पनी मार्फत करको दायरामा ल्याउन खोज्नु पनि सकारात्मक नै लिने कि । सङ्गै अन्य क्षेत्रमा पनि खबरदारी गर्ने कि । रह्यो सुलभका कुरा । प्रतिष्प्रधात्मक र स्वतन्त्रतात्मक यातायात हुँदा नागरिकलाई त फाइदै होला नि । किनकी काठमाडौं देखि बनेपा सम्म सास्ती खेप्दै आएकाले अहिले राहत महशुस गरेका छन ।
सिण्डिकेट खारेजिको प्रकृया अगाडी बढाएको सरकारलाइ असयोग गर्न नहुने धारणा सहित कमल न्यौपाने लेख्छन - अनिश्चितकालिन यातायात बन्द मार्फत दवाव दिने यातायात ब्यावसायिहरुको निर्णय सङ्गै सरकारले आवश्यक परे सेना, शसस्त्र र जनपथ प्रहरि भित्रका ड्राइभरहरु प्रयोग गरि तिनै ब्यावसायिका सवारी साधन कब्जा गरि जनतालाइ यातायात सेवा प्रदान गर्ने तयारि गरेछ । यो ढंगले अगाडि नबढी सरकारले जनतालाइ राहत प्रदान गर्न सक्तैन ! माफियाकरण, दलाल र तस्करहरुको जन्जिर मा रुमल्लिएको नेपाल सुधार्न यो भन्दा सरकार अझै धेरै निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ ।सरकारको यो साहासलाइ हिजो भारतले गरेको नाकाबन्दी ता'क झै जनताले सहयोग गर्नुपर्छ, चाहे जस्तोसुकै कठिनाइ सहनु किन नपरोस् ।
मेरो बिचार : नेपालमा यातायात क्षेत्रमा जस्तो बेथिति अरु कुनै सेक्टरमा छैन - अर्म पर्म या आलोपालो प्रणाली परम्परागत व्यापारिक ढाँचा हुन । परम्परा देखि नै नेपालको यातायात ब्यबसाय यसरि नै चलेको छ -अब आएर यसको आधुनिकीकरण आवस्यक छ - सिन्डिकेट हरु जताततैका तोडिनु जरुरि छ त्यो मनासिब कुरा हो । तर सबैभन्दा पहिले जनताले, ब्यबसायीले या देश भित्र बस्ने जो सुकैले कानुन मान्नु पर्छ भन्ने सोच बोक्नु पर्छ । सिन्डिकेट खारेज भएमा बैंक को ऋण तिर्दैनौं भनेर ब्यबसायी हरुले अभिव्यक्ति दिनु कहाँ सम्मको अराजकता हो विचारणीय कुरा छ ।
देश बिकाशको कुरा पनि गर्ने आधुनिक नेपालको कुरा पनि गर्ने अनि परम्परागत व्यापारिक ढाँचा फेरेर नया तरिकाको ब्यबस्था लागु गराउन खोज्दा अवरोध पनि गर्ने कार्यले देशको स्वरूप परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ । यो सबै मिलेर सरकारलाई सहयोग गर्ने समय हो । नेपालको यातायात क्षेत्र मात्र सिन्डिकेट खारेज भएर "कम्पनि संचालन प्रणाली" अन्तर्गत आउछन भने -यातायात क्षेत्रका लाखौँ मजदुर हरुको रोजगारी सुरक्षित् हुन्छ । खरबौं को ब्यबसाय करको दायरामा आउछ । सुबिधा युक्त यातायात का साधन हरु भित्रिने र पुराना स्वतः विस्तापित हुने परम्परा बसाल्न सकिन्छ लगायत धेरै आधुनिक किसिमका फाइदा हरु हुन जाने देखिन्छ । दुनिया कार्ड स्वाइप गर्दा अटोमेटिक खुलेको दैलो बाट छिरेर आराम संग यात्रा गर्छन हामी कुन जमानामा छौं त्यो पनि सोच्नु जरुरि छ ।
समिति हरु आफु मातहतका गाडी फेर्ने या सुधार गर्ने पक्षमा छदै छैनन् । जति सक्दो पुराना गाडी हरुलाई नै संचालन गर्ने जोखिम युक्त यात्रा गराएरै ओईसा कमाउने ध्याउन्नमा उनीहरु छन् । उनीहरुलाई सरकारी रुट ईजाजत बेच्नु जो छ । बुटवल काठमान्डू रुट ईजाजत लिनलाई गाडी साहुले समितिलाई बुझाउनु पर्ने रकम सुन्दा कहाली लाग्दो छ अवस्था । -त्यो पैसा त गैह्र कानुनि हो नि - दुर्घटना र क्षति लाइ समेत बिमा द्वारा क्षतिपुर्ति गराउने भराउने सामान्य प्रचलनको बिपरित समिति मार्फत गराईन्छ र त्यो रकम पनि करको दायरा बाहिर रहन्छ - ड्राइभर हरुमा समिति ले छुटाई हाल्छ क्यारे भन्ने गलत मानसिकताका कारण कैयौ दुर्घटना हरु हुनेगरेका छन् ।
समितिले आधुनिक यातायात प्रणाली ल्याउन सक्दैन भन्ने होइन सक्छ तर त्यो मानसिकतामा नेपाली समिति हरु छैनन् - यातायात क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन र बिकाश गर्ने हो भने पुरानो ढर्रा भत्काउनै पर्छ । सुरुमा कर प्रणाली लाइ भ्याटमा लैजादा पनि ब्यबसायी हरु आकासै खस्ला जस्तो गरेर आत्तिएका थिए अहिले कुल राजस्वको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा भ्याट बाट मात्र उठ्छ – जुनसुकै नया ब्यबस्था सुरुवातमा अफ्ट्यारो लाग्नु असहज हुनु स्वाभाविक हो तर काम गर्न थालेपछि नया सोच राखेर सरकार ले तर्जुमा गरेका निती नियम हरुले सहज नै बनाउछन डुबाउदैनन् -त्यसैले पनि यातायात ब्यबसायी हरु कम्पनि प्रणाली मा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट खारेजी प्रकरण –कसले के भने ? Reviewed by Durga Pangeni on अप्रैल 19, 2018 Rating: 5